Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Magaalada Dhanaan oo heli doonta biya galin
Magaalada Dhanaan oo heli doonta biya galin
November 23, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
XOL: Iyadoo ay wali socdaan dadaaladii lagu xaqiijin lahaa in magaalada Dhanaan hesho biya nadiif, macaan oo ku filan ayaa waxay wararka nasoo gaadhaya sheegayaan in shirweyn oo ka dhacay magaalada Jijiga looga hadley sida ugu dhakhsaha badan in biyo loo galiyo magaalada Dhanaan oo ah magaalooyinka ugu qaddiimsan xagga cimriga isla markaana ugu hooseeya dhanka koritaanka deeegaanka.
Magaalada Dhanaan oo dhacda gobolka Shabeele ayaa waxey cimrigeedii la ildarneyd biya jeexa oo laga qaxo xili roobeedka iyo oon looga qaxo xiliyada kuleylaha iyadoo illaa iyo hadda aysan dhicin in magaaladaasi laga haqab tiro biyaha macaan ee dagmooyin iyo tuulooyin badan oo deegaanka kamid ahi ay heleen.
Odayada waxgaradka, aqoonyahanka iyo qurba joogta kasoo jeeda dagmada Dhanaan ayaa xukuumadda cod dheer iyo mid gaabanba ugu gudbiyey in magaaladaas biya macaan oo ku filan la galiyo. Madaxweynaha DDSI Cabdi Maxamuud Cumar ayaa balanqaadey safaradii ugu danbeeyey ee uu ku maray qaaradda Australiya iyo dalka Imaaraadka Carabta in codsigaasi uusan mardambe soo noqonin ayna dawladdu mudnaan gaar ah siin doonto magaalada Dhanaan.
Magaalada Dhanaan ayaa ah magaalada kaliya ee tira koobkeeda dib loo dhigey meesha sida caadiga ah ay dagmooyinku bataan ama tirooyinku kordhaan taasoo keentey in miisaaniyaddeena la yareeyo. Adeegyada aasaasiga ee magaaladani hesho ayaan ka hooseeya kuwa magaalooyinka la mid ahi ay heleen.
Isku soo duube shacabka kasoo jeeda magaalada Dhanaan ee ku nool dal iyo dibadba oo ah dad nabadda iyo hormarka deegaanku ka goan yahay ayaa waxey bilahan dhawrayaan inay maruun arkaan Dhanaan oo biya macaan oo ku filan hesha taasoo gali doonta taariikhda xukuumadda Deegaanka Soomaalida Ethiopia.